Semalt: Endri-tsoratra fanatsarana sy ny fomba hamahana azy ireo
Ny Lisa Mitchell, Semalt Customer Success Manager, dia mampahatsiahy anao fa tonga ny endri-tsoratra fanatsarana, ary mety hanimba ny Google Analytics ao anatin'ny roa andro. Tokony hanahy ianao raha mahazo tranokala be dia be ny tranonkalanao. Ataovy azo antoka fa ny fitsidihana azonao dia avy amin'ny loharanon-kevitra ara-drariny, fa tsy avy amin'ny spam referral. Betsaka ny spambots dia mitety aterineto isan'andro, ary ny fitsidihany dia avy amin'ny tranonkala toy ny button-for-website.com, darodar.com, ary ny free-share-buttons.com.
Nahoana no mampiasa spam-refereneran'ny spam?
Azo antoka ny filazana fa misy karazana fomba maro hitadiavana spam, saingy ny fanontaniana dia izay manararaotra ny fizotran'ny fifamoivoizana. Fanontaniana iray hafa mety hikorontan-tsaina anao ny antony mahatonga ny spam mpampiasa spam. Ny valiny tsotra sy tsotra indrindra amin'ireo fanontaniana ireo dia ny spam referral dia adiresy dokam-barotra ho an'ny webmasters. Manantena ny spamers fa hahita ny loharanom-pifandraisana ianao ary hitsidika ny tranonkalany hividy ny vokatra sy ny tolotra.
Ny antony faharoa dia ny fitsangatsanganana spam ny toeram-pitsangatsanganana ary manangana rohy amin'ny tranokalany. Satria ny tranonkala sasany dia mamoaka ny fanadihadiana ataon'izy ireo amin'ny aterineto mba hamoronana rindran-damina amin'ny isa maromaro. Raha mitsidika ireto URL ireto ianao dia hisy rohy hiverina amin'ny tranokalany ho noforonina ho azy. Miharihary fa manangom-bola be dia be avy amin'ireny teknikam-pitsapana ireny ny spam..Avy amin'ny dokam-barotra ho an'ny fandaharan'asam-pandraharahana sy ny famerenana ny tambin-karama, dia mandoa betsaka izy ireo ary mametraka rafi-pitsangatsanganana maromaro hanaparitaka ireo mpampiasa.
Ahoana ny fomba hidiran'ny spambot amin'ny angona fanolorana Google Analytics anao?
Misy fomba roa ahafahan'ny spambots miditra ao amin'ny Google Analytics misy anao. Ny voalohany dia amin'ny alalan'ny fikendrena vondron'olona maro. Ny Google Analytics dia mampiasa kaonty maromaro, ary ny spambots dia mametraka ny codeo ao anaty sora-baventy mba handrehitra ireo pejin-dresaka ao amin'ny serasera. Avelao aho hilaza aminao fa tsy mitsidika velively ny tranokalanao izy ireo ary mamitaka anao amin'ny famoronana ny fahatsapana diso. Ny zavatra rehetra ilainy dia ny kaontin'ny kaonty Google Analytics izay afaka miteraka vola be ho azy ireo.
Faharoa, manana botsa sy spiders i Google mba hitsikerana sy hanasongadinana ireo tranonkala. Ny spambots dia mitsidika ny tranonkalanao, mamorona pejy amin'ny fahitana ary ny taham-pifaliana dia ambony noho ny salan'isa. Ny angon-drakitrao dia voarakitra ao amin'ny kaontinao Google Analytics. Amin'ireo tranga roa ireo, ny bots / scripts dia mikendry ny hampiato ny lohan'ny HTTP ary hametraka ny anaran'izy ireo amin'ny rohy rehetra. Te hampiroborobo ny tranonkalan'izy ireo amin'ny fomba iray na amin'ny iray hafa izy ireo, ary rehefa manombana an'io angona io ny Google Analytics, dia havaozina ny rohy
Fomba fampitsaharana ny famindrana spam
Eto izahay dia niresaka momba ny fomba hanakanana ny spam referral.
Fomba # 1: Ny anaran'ny efitrano fiantsoana
Ny sasantsasany amin'ny tsipika fanavaozana dia tsy tonga ao amin'ny tranonkalanao ary mampiseho fampiantranoana manokana. Noho izany, mora ho anao ny mamorona ny sivana fametrahana ary manakana ireo spammers. Ny anarana nomerao dia tokony ho tranonkala anao ary tokony hanana ny code toy ny Shopify sy PayPal.
Fomba №2: Ny Loharano loharano
Tokony ho voamarikao fa mandeha mivantana eo amin'ny pejinao ny spam ary mampiasa ny domains ho anarana nomeny. Noho izany, tokony hamorona filiran-tserasera ianao mba hanafoanana azy ireo haingana araka izay tratra. Raha mamorona sivana toy izany ianao, dia tokony hitadidy fa ny isan'ny olona dia 255 isaky ny sivana Source .